RudderStack: Vaka Yako Pachega Vatengi Dhata Platform (CDP) | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 16, 2020 China, Gumiguru 15, 2020 Douglas Karr
RudderStack inobatsira data enjiniya matimu kutora yakawanda kukosha kubva kune yevatengi data, ine Mutengi Dhata Platform (CDP) yakagadzirirwa chaizvo kune vanogadzira. RudderStack inounganidza data rekambani kubva kune vese vatengi vanobata - kusanganisira webhu, nhare, uye backend masystem - uye inotumira iyo-chaiyo-nguva kune anopfuura makumi mashanu makore-akavakirwa nzvimbo uye chero hombe dhata yekuchengetera. Nekubatanidza uye kuongorora yavo yevatengi data mune yakavanzika- uye chengetedzo-inoziva nzira, makambani anokwanisa kuzoshandura kuita zviito zvebhizinesi pane ese mabasa avo.
Chinyakare maCDP akaedza kugadzirisa ekuunganidzwa kwedata nekumisikidza, asi zvinosuwisa, mazhinji acho anoita kuti dambudziko riwedzere nekugadzira mamwe madhizaina data uye mapundu ekubatanidza. Vanogadzira dhata vanowanzozviwana vakanamatira pakati, chete vachishandisa simba rezvishandiso senge Snowflake uye DBT nekuti zvimwe zvinhu zvechigadziko hazvibatanidzi pamwe nekukura kwedata rekufambisa.
RudderStack inoisa vanogadzira, maturusi avo avanoda, uye zvivakwa zvemazuva ano kumberi nepakati, zvichibatsira mainjiniya edatha nemakambani avo kuwana mikana mitsva ine simba munzira yavanobatanidza idzi sisitimu dzakakomba nekuvaisa kuti vashande pasangano rese.
RudderStack Cloud: Maitiro Matsva Kune Ako Vatengi Dhata Stack
Imwe yemakambani ekutanga kutamira kuRudderStack Cloud iri Zvikuru, yakavhurika-sosi yekutumira mameseji uye yekudyidzana chikuva chakavakirwa kumatunhu epamusoro-ekuvimba. Iyo kambani inobata yakawanda mavhoriyamu e data inogadzirwa neayo emabhizinesi vatengi uye yakavaka yayo CDP zvivakwa pane zvazvino zvishandiso, kusanganisira Snowflake, DBT, uye RudderStack Cloud.
NaRudderStack Cloud, isu tabvisa zvirambidzo pahuwandu hwechiitiko uye tinokwanisa kutumira rese data ratiri kuda kuti Snowflake. "Tinogona kuongorora nekuita pane ese akakosha data data revatengi, tozopedzisira tave bhizinesi rinotungamirwa nedhata."
Alex Dovenmuehle, Musoro weData Injiniya, Mattermost
RudderStack Cloud inoita kuti zvive nyore kune mainjiniya e data kuunganidza, kusimbisa, kushandura, uye kuendesa data revatengi kune yavo imba yekuchengetera, chaiyo-nguva yekushambadzira masevhisi, uye nemashandisirwo egore anoshandiswa nezvikwata mukati mekambani. Pfungwa huru dzinosanganisira:
Cloud Yemazuva Ano - Yakavakwa pa Kubernetes yezve gore-rinozvarwa nyika, yakatarisana nezviyero zvakanyanyisa uye kushivirira kusakwana, ine yakavhurwa sosi sosi, kuvanzika -kutanga kuvaka, uye yekuvandudza-yakanangana neturu yekuita kuti zvive nyore kubatanidza chigadzirwa muchigadzirwa chako chiripo, uku uchichengetedza nyore kushandisa izvo inouya negore SaaS.
Dhata Warehouse Centric - RudderStack Cloud inokutendera iwe kushandura imba yako yekuchengetera CDP ine maficha senge inogadziriswa, padyo-chaiyo-nguva kubvumirana, uye SQL seChipupuriro, iyo inoshandura imba yako yekuchengetera RudderStack Source.
Mushambadzi Kutanga - RudderStack anotenda kuti mutengi dhata dhata inofanirwa kunge iri yeinjiniya timu, ndosaka chigadzirwa chedu chichigara chichigadzira-chekutanga uye chinobatana nematurusi avanoshandisa uye kuda.
RudderStack Cloud ndiyo inonyanya kushanda, inodhura uye yakaomesesa vatengi dhizaina chigadzirwa kune vanogadzira.
Saina Kuti Uwane Yemazuva gumi nemana Yemahara Muedzo
Tags: cdpMutengi Dhata PlatformwedzeraRudderstack gore